विद्यालय पढ्ने उमेरमा विद्यार्थीहरु कुल'तमा परी ला'गुऔषध सेवन गर्दै ! »
विद्यालय पढ्ने उमेरमा विद्यार्थीहरु कुल’तमा परी ला’गुऔषध सेवन गर्दै !
कैलाली, ०७ मंसिर। विद्यालय पढ्ने उमेरका कतिपय विद्यार्थी नै कुल’तमा परी ला’गुऔषध सेवन गर्ने गरेका छन् । लकडाउनपछि लामो समयदेखि विद्यालय बन्द रहँदा विद्यार्थी यस्ता कुल’तमा फ’स्ने जोखिम झन् बढेको छ ।
कैलालीको जनता राष्ट्रिय मावि सोनाहफाँटाका शिक्षक कृष्ण चौधरीले ला’गुऔषधको कुल’तमा लागेकै कारण कतिपय विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेको बताउँछन् । “हाम्रो आसपासका विद्यालयमा हरेक वर्ष आठ÷दश बालबालिका ला’गुऔषधमा फसेकै कारण विद्यालय छोड्छन्”, शिक्षक चौधरी भन्छन्, “विद्यालय बन्द भएको आठ महिना भयो । विद्यार्थी फुर्सदिला भएका छन् । अझ गलत सङ्गतमा फ’स्ने जोखिम बढेको छ ।”
नेपाल प्रहरीको ला’गुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो काठमाडौँको तथ्याङ्कमा पोहोर अर्थात् २०७६ सालमा १९ वर्षमुनिका ला’गुऔषध सेवनकर्ता २१ प्रतिशत छन् । विसं २०७६ मा सबै उमेरका नेपालभर एक लाख ३० हजार ४२४ ला’गुऔषध प्रयोगकर्ता रहेका छन् । तीमध्ये पुरुषको सङ्ख्या एक लाख २२ हजार छ भने महिला झण्डै नौ हजार छन् ।
ला’गुऔषधका रूपमा गाँ’जा, अ’फिम, सुँ’घ्ने र उत्तेजना दिने पदार्थको प्रयोग हुने प्रहरीले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी गाँ’जा र त्यसले बनेका ला’गू पदार्थको प्रयोग भइरहेको छ । साथीको द’बाब, मनोरञ्जन, त’नावजस्ता कारणले पनि ला’गुऔषध प्रयोगकर्ता बढेका ला’गुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णकुमार महत बताउँछन् ।
“बालबालिका गलत सङ्गतका कारण बढी कुल’तमा फसेको देखिन्छ”, उनी भन्छन्, ‘‘बालबालिकालाई जोगाउने बढी दायित्व अभिभावककै हुन्छ । किशोरावस्थाका नानीबाबुको आनीबानीको निगरानी आवश्यक छ ।”
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कैलालीको तथ्याङ्कमा विसं २०७४÷७५ मा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थी चार प्रतिशत छन् । यद्यपि ला’गुऔषधकै कारण पढाइ प्रभावित हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या कति छ भन्ने तथ्याङ्क एकाइसँग छैन ।
बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई कुल’तबाट जोगाउन कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले वडामा चेतनामूलक कार्यक्रम र विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिइरहेको वडा नं ७ का वडाध्यक्ष रामलाल डगौरा थारू बताउँछन् ।
“हामीले प्रहरीसँगको साझेदारीमा विद्यालय र बस्तीस्तरमा ला’गुऔषधका असरबारे जानकारी दिने गरिरहेका छौँ”, उनी भन्छन्, “कुल’त सेवनको असर समाजमा हुने आ’पराधिक गतिविधिसँग समेत जोडिने भएकाले यसलाई रोक्न जिम्मेवार भएर लागेका छौँ तर लकडाउनपछि गाउँमै गएर कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन ।”
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका मनोविज्ञान विषयका उपप्राध्यापक नाथुराम चौधरी ला’गुऔषध प्रयोग घटाउन सीमा नाकामा जाँच बढाउने, ला’गुऔषधको प्रयोगबाट हुने हा’नी नोक्सानीबारे चेतना फैलाउने, कानूनको कडा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।
“बालबालिकालाई माया देखाएर सही बाटोमा हिँडाउन अभिभावकले समय दिनुपर्छ”, उपप्राध्यापक चौधरी भन्छन्, “बालबालिकाले अभिभावकको साथ नपाएर पनि बिग्रिएका भेटिन्छन्, सन्तानलाई सही बाटो देखाउन चुक्न हुँदैन, एउटा बच्चा बिग्रिए समाज बिग्रन्छ ।”
कुल’तले बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिकरूपमा मात्र कमजोर नबनाएर पारिवारिक क’लह पनि बढाउने गर्छ । यसरी गलत सङ्गत वा गलत बाटोमा लागेका बालबालिकालाई ‘रि’ह्याब सेन्टर’ अर्थात् पुनःस्थापना केन्द्रमा राख्न सकिन्छ । कैलालीको टीकापुरमा मात्र चारवटा पुनःस्थापना केन्द्र छन् । यसले पनि समाजमा ला’गुऔषध प्रयोग बढ्दो छ भन्ने देखाउँछ । टीकापुरका पुनःस्थापना केन्द्रमा विद्यालयमा पढ्ने उमेरका विद्यार्थी पनि छन् ।
टीकापुरका एक अभिभावक समय दिन नपाउँदा आफ्नो छोरा कुल’तमा फसेको बताउँछन् । “म दिनभरि ज्यालादारी काम गर्थेँ, १६ वर्षमै कुल’तमा फस्यो, रातिराति घर आउँथ्यो, मैले सुधार्न सकिनँ”, उनले भने, “पछि चार महिना सुधार केन्द्रमा राखेँ, अहिले छोरा सुध्रिएको छ । मैले ज्यालादारी छाडेर आमाछोरा मिलेर नास्ता पसल खोलेका छौँ । छोराछोरी आमाबाबुको समय खोज्दा रहेछन् ।”
दुबईमा अड्किएका नेपाललीलाई लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज उड्यो